Zvakanaka here kana Mwari? - Cloud Library
Pamba - Mabhuku - Zvakanaka here kana Mwari?
Zvakanaka here kana Mwari?
Sei zvakanaka pasina Mwari zvisina kukwana?
Kana zvakanaka anofanirwa kunge ari Mwari. Ndizvo?
Mazuvano mazwi ekuti zvakanaka nekuti Mwari ava kunge anoreva zvimwechetezvo. Tinotenda kuti zvinogamuchirwa neruzhinji sezvakanaka zvitori muurongwa nezvido zvaMwari. Kupa, kuzvininipisa, kururamisa – zvakanaka. Undyire, kuzvikudza, neutsinye – zvakaipa. Mutsauko wazvo unoratidza kuva pachena.
Asi kuti ndizvo zvese here? Kana zvakanaka zviri pachena kudaro, sei Shoko raMwari richiti tinoda kuva nekunzvera neungwaru kuti tigone kunyatso zvicherechedza?
Zvakanaka here kana Mwari? haisi imwewo mharidzo yekuzvibatsira. Bhuku rino richaita zvakawanda kudarika kushandura maitiro ako. Richakupa simba rekuita nhaurwa yechimwe chinhanho chepamusoro naMwari zvinozoshandura chipi nechipi cheupenyu hwako.
Turunura (~5.19 MB)